Aluminum ဝက်အူပုလင်းပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ - China Aluminum ဝက်အူပုလင်းထုတ်လုပ်သူများ
၃၅၀ မီလီမီတာမှ ၅၀၀ မီလီမီတာရှိသောစိတ်ကြိုက်အချိုရည်များ၊ အလူမီနီယမ်အားကစားရေဗူးများကိုဝက်အဖုံးအဖုံးနှင့်အတူ
အသုံးပြုမှု - အဖျော်ယမကာ၊ ဖျော်ရည်၊
မျက်နှာပြင် - ပိုလန်၊ ၁-၉ အရောင်အော့ဖ်ဆက်ပုံနှိပ်ခြင်း
လက်ကားအရည်အသွေးမြင့်အထူးဗလာကျသည့်ပုလင်းများသည် ၂၄ ပုလင်းပုလင်းနှင့်အတူထူးခြားသောပုလင်းများ
အသုံးပြုမှု - ရေမွှေး၊ ခေါင်းလျှော်ရည်၊ အလှကုန်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစောင့်ရှောက်မှု၊
EBI သည်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်လူမီနီယမ်ပုလင်းများ၊ လူမီနီယမ်ဘူးများ၊ အလူမီနီယံပြွန်များနှင့်အခြားအမွှေးနံ့သာများ၊ ရေမွှေး၊ အလှကုန်၊ ဆံပင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ၊ ဆေးဝါး၊ အိမ်သူအိမ်သား၊ အစားအစာ၊
ဖန်စီကြာရှည်ခံ။ ပေါ့ပါးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးအိမ်သုံးသုံးအမြင့်ဆုံးအသေးစားအရွယ်အစား ၃၀ မှ ၁၀၀ မီလီမီတာရှိလေဟာနယ်အလူမီနီယံခရီးသွားပုလင်းအထုပ်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးပြုသည်
အသုံးပြုမှု - lotion၊ ရေမွှေး၊ မျက်နှာအရေပြား၊ အဟာရနှင့်နေ့စဉ်ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်
ဒီဇိုင်းသစ် 800ml အလှကုန်အလူမီနီယံဆီပုလင်းနှင့်အတူ
အတွင်းပိုင်းသုတ်ဆေး - epoxy အတွင်းပိုင်းအပေါ်ယံပိုင်း
ပုံနှိပ်ခြင်း - ပိုးပုံနှိပ်ခြင်း၊ အပူလွှဲပြောင်းခြင်း၊ အော့ဖ်စက်ပုံနှိပ်ခြင်း
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေသောကြာရှည်ခံမှုအသစ်ဇိမ်ခံလက်ကားအလွတ်အလူမီနီယမ်ပုလင်း၊ အတွင်းပိုင်းသုတ်ဆေး epoxy အတွင်းပိုင်းအဖုံးမျက်နှာပြင်အရောင်တင်သည်အရောင်ယွန်းပြီးသားပိုးမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ အပူလွှဲပြောင်းပုံနှိပ်ခြင်း၊ အော့ဖ်စက်ပုံနှိပ်ခြင်း
အဆိုပါ coronavirus ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း crayzily ပျံ့နှံ့အဖြစ်။ သင်၏ထုတ်ကုန်များကိုလူအုပ်ထဲမှထင်ရှားစေရန်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
၁။ လူမီနီယံမှုတ်ဆေးဘူးကိုခေါင်းလျှော်ရည်၊ ရေချိုးခန်းဂျယ်လ်၊ နေ့စဉ်စောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်များ၊ ဆေးဝါးထုတ်ကုန်များနှင့်လက်သန့်ရှင်းဆေးပိုးသတ်ဆေးအရည်များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
4. နမူနာအခမဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, 1-3 ရက်အတွင်းပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကြိုက်နမူနာများနှင့် ပတ်သက်၍ နမူနာကြေးကိုသင်၏ပုံနှိပ်ခြင်းအနုပညာလက်ရာများမှဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ pre- ထုတ်လုပ်မှုနမူနာများအတွက် 7-15 ရက်။
၅။ ပုလင်း၏အရွယ်အစား၊ အရောင်၊ တံဆိပ်၊ မျက်နှာပြင်အပေါ်တွင်ကုသမှုသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီပြုလုပ်နိုင်သည်။
ရွေးချယ်မှုအတွက် T / T, L / C, D / P, D / A, PayPal, Western Union, Escrow နှင့် MoneyGram ။
7. Mass ထုတ်လုပ်မှု: 30 ~ 45 ရက်
CBD မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီအတွက်ရွှေရောင်ပန်းရောင်သေတ္တာဘူးကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရောင်ပုံနှိပ်ထုတ်ကုန်ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်ပစ္စည်း 99.7% aluminium fin အဆုံးမဲ့ 100% ပြန်လည်အသုံးပြု baraly ပျက်စီးခြင်း။ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု 5Ml-2L ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်လိုဂိုအပူလွှဲပြောင်းခြင်းပုံနှိပ်ခြင်း / အော့ဖ်စက်ပုံနှိပ်ခြင်း / silkscreen ပုံနှိပ်ခြင်း / ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် / ဆေးသုတ်အရောင်မည်သည့် panton အရောင်မဆိုကလေးသူငယ်ကာကွယ်နိုင်သည့် ဦး ထုပ်、 Dropper、 မှုတ်ဆေး、 ပန့်အသုံးပြုမှု CBD ဆီ၊ E-အရည်၊ မရှိမဖြစ်ဆီ၊ အရည်ဆေး၊ အလှကုန် သွေးရည်ကြည်, ဓာတ်ခွဲခန်းဓာတုဗေဒ ...